SeraÂ² Watch | Ankapobeny |
24 Jolay, 2008 05:30
Watch if ... tsy miblagy aho fa mibaogy ny blaogy.org
Nampidirin'i dotmg, Sokajy [	Ankapobeny ]
[ (12) Hametraka hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ]
Nampiasa ny lasitra Tarski tao faha 1.1.3 nataon'i Benedict Eastaugh sy Chris Johnson aho tao amin'ny blaogiko. Marihina fa WordPress MU no motera mitondra io blaogy io. Taty aoriana kely dia nasiako an'ity widget atao hoe Recent Posts ity koa izy, izy io dia mametraka rohy ahitana ireo lahatsoratra 5 (afaka ovaina) farany nivoaka teo amin'ny blaogiko.
Raha vao nametraka an'io widget io anefa aho dia lasa nisy nampihomehy ny blaogy satria rehefa misy olona mametraka fanamarihana amin'ny hevitra nivoaka farany indrindra, dia tsy tafaraka amin'iny lahatsoratra iny ilay fanamarihana fa miditra any amina lahatsoratra hafa izay efa niseho taloha. Rehefa tena nodinihina, dia raha toa misy rohy 5 miseho ao amin'ny Recent Posts, dia ilay lahatsoratra fahadimy farany no andehanan'ireo fanamarihana. Raha ny fanazavana azo omena, ho ahy tsy nandinika ny fango nanoratana ireo tovana sy ny moteran'ity blaogy ity, dia angamba misy fitadidiana ny laharan'ny lahatsoratra ao anatin'ny fango ao voaovan'ity Recent Posts ity, ka izay no mahatonga ilay fisavoritahana.
Nony nesorina ilay widget Recent Posts dia nilamina ny raharaha. Saika hapetrako amin'ny fiteny vahiny ity fa saingy tsy haiko na azo ametrahana fiteny vahiny ny blaogy.com na tsia, dia nataoko tamin'ny fiteny malagasy ihany aloha.
30 Martsa, 2007 07:06
[ (0) Hametraka hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ]
Votoatiny: Mpametraka fanamarihana tsy manana tranonkala.
Rehefa mametraka fanamarihana amin'ny blaogy dia misy toerana ahafahana mametraka ny tranonkalany eo. Iny avy eo no lasa rohy eo ambanin'ny solonanaran'ilay nametraka fanamarihana. Azo tsy fenoina izy iny, satria misy ny olona tsy manana tranonkala. Rehefa tsy feno anefa iny, dia mbola eo ihany ilay rohy hoe "visit dotmg", ary ny fango HTML miaraka amin'izay dia hoe <a href="">visit dotmg</a>, hany ka lasa manondro an'ilay pejy vakiana iny ihany io rohy io.
Tokony tsy atao rohy izany io solonanarana io rehefa tsy nanoratra tranonkala ilay mpametraka fanamarihana, fa tokony hijanona ho soratra fotsiny.
Ohatra: Jereo ny rohy hoe "Visit ikalamako" sy hoe "Visit ikaretsaka" amin'ity pejy ity: http://hery.blaogy.com/post/4/2641
22 Martsa, 2007 09:02
[ (4) Hametraka hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ]
Dia indrisy fa efa feno SPAM koa izany izao ny blaogy.com
19 Martsa, 2007 07:15
[ (1) Hametraka hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ]
Votoatiny: Tsy mila fanamarihana.
Rehefa nisafidy ny tsy hametrahan'ny mpitsidika fanamarihana amin'ny pejy ny tompon'ny blaogy anankiray, dia manjavona ilay form ahafahana mametraka fanamarihana iny. Saingy mbola miseho eo amin'ny pejy kosa ny hoe hametraka hevitra (0) sy ny teny hoe Leave a Reply. Mety hamitaka ny mpamaky ny blaogy iny ka tokony hosoloana soratra toy ny hoe "Tsy maniry hametrahana fanamarihana". Tamin'izaho vao nanomboka nitsidika ny blaogy.com tokoa dia nisy lahatsoratra lavalava izay tena nahaliana ahy tokoa ary saika hametraka fanamarihana aho mba hahafahako mifandray amin'ilay mpanoratra. Noheveriko hoe tsy vita hatramin'ny farany ny chargement-n'ilay pejy no naha-tsy teo an'ilay form, dia nanandrana nanao Reload efa ho in-telo aho. Indrisy, ... hay nosakanan'ilay mpanoratra mihitsy ny fanamarihana ao amin'ny blaoginy.
Asa, mety ny lasitra (template) sasantsasany angamba no voakasik'io fa tsy ny blaogy rehetra, fa ny anankiray hitako aloha dia ny lasitra ampiasain'i Soanja.
13 Martsa, 2007 08:24
FampiasÃ na ny kialo title
Tsy tokony hatao bambaray be fotsiny hoe "Namana Serasera.org - Malagasy mifandray - Tsiky dia ampy" ny ao anatin'ny kialo title. (tohiny)
28 Febroary, 2007 13:08
One response to ARTICLE_X
Hanombohana ny tsikera hahitan'izay liana azy dia hasongadina aloha ny heverina fa tsi-fetezana anankiray eto @ blaogy.com. Inoana anefa fa tsy haharitra ela dia ho voavaha ity olana ity fa androany 28 febroary izy no apetraka eto fa @ fotoana hamakianao ity lahatsoratra ity mety ho efa milamina ny aminy. Ny tsikera hafa hapetraka eto anefa, na dia mahakasika ny serasera.org aza, dia mety hahaliana izay malagasy liana @ PHP/HTML, Web, sy ny sisa satria mety hahitana toromarika ihany amin'ny fomba fiasana amin'ny Web. Olana iray mitranga @ blaogy.org izy ity. Rehefa mijery lahatsoratra iray ianao dia ery ambonin'ny lisitry ny fanamarihana natao tamin'ilay lahatsoratra ery dia misy hoe "One response to ARTICLE_X", na tsy misy na anankiray na roapolo no isan'ny fanamarihana eo.
28 Febroary, 2007 12:43
Inona ny seraÂ² Watch
SeraÂ² Watch dia blaogy anankiray natao hanara-maso ny fivoaran'ny serasera.org.
Ahoana no fipetraky ny fanaraha-maso ny serasera.org?
Azo atao tsara ny manao izany @ forum sy ny toy izany fa mba te hiblaogy koa ny tena, amin'izay toy ny ho ahy manokana ireto tsikera ireto fa tsy voatery handany fotoana hamaky azy ny mpitantana ny sehatra.
Fa maninona ny serasera.org no arahi-maso kanefa ny tetikasa an'ny dotmg manokana aza tsy mandeha amin'ny laoniny?
Ny serasera.org dia fitaovana be mpampiasa, ary ny hangezany dia afaka ireharehan'ny malagasy. Inoako fa misy fiantraikany kokoa hanasoa ny malagasy hafa ny fitsikerako ny sehatra lehibe toy ny serasera.org toy izay ny fandaniako ny fotoanako amin'ny tetikasako izay vitsy no mety ho liana amin'izany.
dotmg - sehatra hafa